Sida loo abaabulo Android Apps
> Resource > Apps > Sida loo abaabulo Android Apps
Iyada oo badan oo barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama miiska, waxaa laga yaabaa inay dhib kugu si aad u hesho kuwa aad doonayay. Taa ka sii daran, sidoo kale shaashada yar oo guriga Android blocks aad in uu abaabulo Android si xor ah Apps. Haddii aad dhibtaa badan, aad leedahay news fiican halkan. Taasi waa qodobkan ku tusi doonaa tababare awood leh Android magacaabay Wondershare MobileGo for Android (isticmaalayaasha daaqadaha). Iyadoo qalab this, aad si xor ah kala soo bixi kartaa, rakibi, uninstall, dhoofinta, iyo xataa wadaagaan barnaamijyadooda Android.
Sida user Mac ah, waxa aad gargaar ka codsan kartaa Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waxa kale oo ay ku siinaysaa fursad ah si loo soo dajiyo, uninstall iyo barnaamijyadooda Android gurmad si fudud aad.
Download Tababaraha this Android in ay isku dayaan abaabulka barnaamijyadooda Android.
Labada versions of this Tababaraha Android si fiican u shaqeeyaan. Download mid sax ah. Halkan, waxay kuu ogolaanaysaa 'isku day Wondershare MobileGo for Android in uu abaabulo barnaamijyadooda ku saabsan qalab Android.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo Wondershare MobileGo for Android, waxaad abaabuli karaan barnaamijyadooda ku badan kiniiniyada telefoonada Android smart iyo, sida Samsung, HTC iyo LG. Hubi qalabka Android dheeraad ah oo faahfaahsan oo ku saabsan Tababaraha info this Android .
Orod Tababaraha this Android oo calan kor u qalab Android aad
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan Tababaraha this Android on your computer socda Windows OS. Connect qalab Android si aad u computer sidoo kale via cable USB ama via WiFi. WiFi waxaa kaliya la isticmaali karaa marka aad isticmaasho Windows version of qalab this. Markaas, waxaad ka heli furmo suuqa weyn ee sida shaashadda hoose ayaa muujinaya.
Download barnaamijyadooda Android ka Google Play
Mid ka mid ah feature socodyada muhiimka ah aalad waa in aad si toos ah u soo bixi kartaa barnaamijyadooda Android dukaamada app, sida Google Play. Ama, waxaad si column bidix ku dari kartaa website-app jeceshahay. Riix Cross ku column bidixda ah ee kore. Daaqadda pop up ka, ku qor magaca app website iyo URL.
Doondoon, oo kala soo bixi barnaamijyadooda aad doonayay. Chine doonaan si toos ah in lagu rakibo qalabka Android iyo badbaadiyey on your computer.
Ku rakib Chine in qalab Android aad
Haddii aad ku badbaadi lahaayeen barnaamijyadooda fantastic badan on your computer, waxaad iyaga ku rakiban kartaa qalab Android aad. Tiirka bidix, guji "Apps" inay soo qaadaan suuqa kala app. Guji "rakib". Ka dib markii uu furmo suuqa hoos-hoos file browser u muuqataa, falgali meesha barnaamijyadooda ku kaydsan yihiin. Dooro barnaamijyadooda aad doonayay oo iyaga loo soo dajiyo qalabka Android aad.
Chine uninstall Android
Iyadoo tababaraha this Android, waxaad si deg deg ah ka heli kartaa barnaamijyadooda la rabin oo iyaga uninstall. Dooro barnaamijyadooda ka. Guji "uninstall" iyo "Haa" saaro barnaamijyadooda Android.
Dhoofinta Android Apps u gurmad
Si barnaamijyadooda android gurmad aad PC, waxaad riixi kartaa "Dhoofinta" ka dib dooranaya barnaamijyadooda aad doonayay. Calan Jid badbaadiyo in uu kaydiyo barnaamijyadooda ka.
Share Android Apps asxaabta iyo qoysaska ka mid ah
Tababaraha Tani Android siinayaa fursad ay ku saaxiibadaa iyo qoysaska wadaagaan barnaamijyadooda aad jeceshahay aad. Dooro app in aad go'aansato in aad u muujiyaan. Dhinaca midig muuqan doonaa 3 fursadaha. Riix icon 3aad. In liiska jiido hoos u, ee ka dooro mid ka "Share to Facebook", "Share Twitter" iyo "Share via SMS" si ay u wadaagaan barnaamijyadooda ka.
Fiiro gaar ah: The barnaamijyadooda bixi la wadaagi karo oo uninstalled. Haddii qalabka Android aad habaysan, waxa kale oo aad uninstall karaan barnaamijyadooda ka hor ku yaal.
Sida loo abaabulo Music on Device Android
Sida loo ka PC soo dir SMS si Mobile Phone
Top 10 gaabis Motion Android iyo macruufka Apps
Apps ka Android wareejiyo Moto X 1 Click
10 Best Photo ayeey Apps u iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka Samsung Galaxy S2 in S4
Samsung Said: Apple Khasaarooyin maxkamadda qaadisteeda dib Joojiya waxaa habboon?
Sida loo Download Wondershare MobileGo App wirelessly
Sida loo Download VEVO si TV Apple